Abasebenzi bangena ngemvume
Isikole samabanga aphansi & Nursery
Ingxenye yePortico Academy Trust.
ukuvula iminyango, ukuvula amandla
IPorters Grange Primary School iyisikole futhi iyingxenye yePortico Multi Academy Trust.
UMkhandlu waseSouthend Borough wabela lezi zindawo ePorters Grange Primary School, sicela uxhumane nabo kuqala.
Ihhovisi lendawo lise:
Ucingo: 01702 212934
Uma ungathanda ukuhlela ukuvakashelwa esikoleni sethu, sicela ushayele isikole ku-01702 468047.
Ukungeniswa Kwesikole Samabanga Aphansi 2020/21
Faka isicelo online ku: www.southend.gov.uk/admissions ngomhlaka 15 Januwari 2020.
Kunezindlela ezimbili zokwenza isicelo sakho sendawo yesikole; kungenziwa noma:
1. Ku-inthanethi ngewebhusayithi yoMkhandlu (bheka ngenhla) noma
2. Kwisicelo sephepha, amakhophi alo atholakala emahhovisi oMkhandlu eCivic Centre, eVictoria Avenue.
Uhlelo oluku-inthanethi luyashesha, luvikelekile futhi luyimfihlo. Kuyathenjwa ukuthi njengaseminyakeni edlule abazali abaningi ngangokunokwenzeka bazofaka isicelo ku-inthanethi sezindawo zamabanga aphansi ngoSepthemba 2020.
Izinzuzo zokwenza isicelo sakho ku-inthanethi yilezi:
* indawo eku-inthanethi itholakala amahora angama-24 ngosuku nezinsuku eziyi-7 ngeviki kuze kube phakathi kwamabili ngosuku lokuvala lwango-15 Januwari 2020;
* kunezixhumanisi eziya kumawebhusayithi ezikole ukuze uthole imininingwane eminingi mayelana nezikole zamabanga aphansi ngaphambi kokuthatha isinqumo ngokuthanda kwakho;
* ungangena futhi ubuke ifomu lesicelo sengane yakho futhi ungenza izinguquko emininingwaneni esefomini lesicelo kuze kube phakathi kwamabili ngosuku lokuvala;
* uhlelo luphephile futhi lunochungechunge lwezinqubo zokuphepha ezigcina imininingwane enikeziwe iphephile;
* abukho ubungozi bokuthi isicelo sakho sizolahleka kokuthunyelwe;
* ungangena futhi ubuke isikole sengane yakho ngoSuku Lokunikezwa Lukazwelonke kusuka kunoma yikuphi emhlabeni futhi okunikezwayo kuzothunyelwa nange-imeyili ngosuku lokunikezwa (awekho amakhophi aqinile athunyelwe);
* ungakwemukela ukunikezwa kwendawo yesikole online futhi ucele ukuthi ingane yakho igcinwe ohlwini lokulinda.
Ukufakwa kwezikole: izicelo zezingane zaphesheya
Ezimweni eziningi, izingane ezivela phesheya kwezilwandle zinelungelo lokuya ezikoleni eNgilandi.
Kungumsebenzi wabazali ukubheka ukuthi izingane zabo zinelungelo yini, ngaphansi kwezimo zabo zokungena kuma-visa, zokufunda esikoleni. Ukusiza abazali sincoma ukuthi labo abafisa ukufaka izicelo zesikole esikhokhelwa nguhulumeni babheke ukuthi banelungelo lokuhlala noma imibandela yama-visa abo kungenjalo bavumele ukufinyelela esikoleni esixhaswe nguhulumeni.
Abantu bamazwe angaphandle abakwazi ukusebenzisa i-visa yezivakashi yezinyanga eziyi-6 noma i-visa yezinyanga ezi-6 yokufunda isikhathi esifushane ukungena e-UK ukuze babhalise njengomfundi esikoleni. Thola ukuthi lawa ma-visa angasetshenziselwa ini ku- visa yezivakashi kanye namakhasi we- visa wesifundo esifushane.
Thola kabanzi vakashela uMnyango Wezemfundo .
IPorters Grange Nursery iyatholakala ezinganeni leli gama ngemuva kosuku lwazo lokuzalwa lwesi-3. I-Nursery ibanjwa ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-8.45 ekuseni kuya ku-11.45 ekuseni noma ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-12: 15pm kuya ku-3.15pm, isikhathi sesikhathi kuphela. Siyakwazi ukuthatha izingane ezifanele ukuthola uxhaso lwamahora angama-30 kusenesikhathi futhi singaxoxa futhi uma ungathanda ukukhokhela amahora angeziwe.
Uyacelwa ukuthi ugcwalise imininingwane elandelayo ukuze ingane yakho ibekwe ohlwini lwama-Nursery Waiting.
Usuku Lokuzalwa Lwengane
Igama lezelamani ePorters Grange
Incwadi kaPortico Consulation Admissions
Porters Grange Primary School & Nursery, Lancaster Gardens, eSouthend oLwandle, e-Essex, SS1 2NS
Ingxenye yePortico Academy Trust - ukuvula iminyango, ukuvula amathuba - www.porticoacademytrust.co.uk
I-59 Ronald Hill Grove, Leigh-On-Sea, i-Essex, i-SS9 2JB - 01702 987890